ITOOBIYA OO SHEEGTAY IN XAALADA DEGDEGA AHI GUUL SOO HOOYSAY | SOMALISTATE.COM
ITOOBIYA OO SHEEGTAY IN XAALADA DEGDEGA AHI GUUL SOO HOOYSAY
No comments ADDIS ABABA – Madaxa gudiga loogu talagalay dabagalka xaalada degdega ah ee Itooobiya, Siraj Fegessa, ayaa sheegay in dalku guul ka soo hooye xaalada degdega ah ee la soo rogay bishii Oktoobar.
Siraj oo ah wasiirka gaashandhiga ayaan faahfaahin ka bixin guulaha la gaadhay laakiin xukuumada ayaa horey u xustay in amaankii iyo kala danbayntii dalka ku soo laabteen.
Kooxaha mucaaradka ah iyo warbaahinta taageerta ayaa sheega inay weli dalka ka jiraan kacadoono iyo dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo dawlada lagaga soo horjeedo.
Siraj ayaa sheegay in shir lagu qiimaynaye xaalada degdega ah ay ka soo qaybgaleen saraakiil ka mid ah ciidanka amaanka oo ismaamulada Itoobiya oo dhan laga soo xulay.
Waxaa jira xogo tilmaamaya in ciidamo badan oo laga qaaday qaybaha kale ee Itoobiya lagu tuulay gobolada Axmaarada iyo Oromada oo ah xudanta kacdoonka Itoobiya.